प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकाएक गङ्गालाल अस्पताल किन पुर्याइयो ? — Imandarmedia.com
प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकाएक गङ्गालाल अस्पताल किन पुर्याइयो ?
काठमाडाैं । बुधाबर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाँसबारीस्थित शहिद गंगालाल हृदय केन्द्र पुगेपछि धेरै विभिन्न अड्कलहरु गरे । उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएका समाचार पनि बाहिरिए तर उनी नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरी बालुवाटार फर्किएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य परीक्षण गरी बालुवाटार फर्किसकेको जानकारी दिए। ‘प्रधानमन्त्री नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि केन्द्र जानुभएकोमा अत्यावश्यक परीक्षण गरी निवास फर्किसक्नुभएको छ,’ थापाले भने।
बुधबार बिहान पार्टीका नेता र मन्त्रीहरूसँग पछिल्लो राजनीतिक विवादबारे छलफल गरेका प्रधानमन्त्री ओली ११ बजे पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी भएका थिए । त्यसपछि उनी संसद बैठकमा गएका थिए । प्रधानमन्त्रीले फागुन तेस्रो साता दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गराएका थिए ।
यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जारी स्थायी समिति बैठकले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिने तयारी गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता माधवकुमार नेपाल लगायत १९ जनाले मंगलबार र बुधबार समिति बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिसकेका छन्। प्रचण्ड-नेपाल निकटका थप सदस्यले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने तयारी गरेका छन्।
नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा प्रधानमन्त्री चरम अल्पमतमा छन्। स्थायी समितिमा पूर्व माओवादीका १९ जना र पूर्व एमाले पक्षका २६ जना सदस्य छन्। २६ जनामध्ये १३ जना माधव नेपाल पक्षका छन्।
यसरी प्रचण्ड-नेपाल पक्षले सजिलै स्थायी समितिबाट प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिने राजनीतिक निर्णय पास गराउन सक्छन्। त्यो निर्णय केन्द्रीय समितिबाट पनि पास हुनुपर्छ। केन्द्रीय समितिमा पनि प्रचण्ड-नेपाल पक्षको बहुमत छ। उनीमाथि राजीनामाको नैतिक दबाब पक्कै पर्ने देखिएकाे छ ।
यता नेकपा एमाले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा खैलाबैला मच्चिएको छ। बामदेव गौतमसहित कतिपय नेताले नेकपाकै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा एमाले दर्ता गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन् ।
नेकपा एमाले दल दर्ता गर्न खोज्ने को-को हुन् ? केन्द्रीय समितिमा को-को छ भन्ने विवरण समेत बाहिरिएको छ । विवरणअनुसार १२ असारमा आयोगमा दल दर्ताका लागि महासचिव मनिषकुमार उपाध्यायले आयोगमा निवेदन दिएका छन् । दलको अध्यक्ष भने सन्ध्या तिवारी हुन् । उनी मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–६ की भएको पाइएको छ । दलले आफ्नो छापमा डाँडामा उदाउँदो सूर्य राखेको छ ।
नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवदेन दिने सूचीमा रामेछाप गेलु निवासी रेस्लर भगवती खड्का उपाध्यक्ष छिन् । त्यसैगरी अर्की रेस्लर खोटाङ रातापानीकी अस्मिता सुनार प्रदेश १ को सचिव छिन् । प्रस्तावित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा प्रायः सबै युवायुवतीहरु छन् । तीमध्ये कतिपय पूर्वएमाले समर्थित छन् भने कोही राजनीतिक पृष्ठभूमिका छैनन् ।
महासचिव मनिष कुमार उपाध्यायका अनुसार पार्टी अध्यक्ष सन्ध्या तिवारीलाई अहिले सार्वजनिक नगर्ने पार्टीले नीति लिएको छ । पार्टी दर्ताको प्रमाणपत्र पाइसकेपछि बल्ल अध्यक्ष सार्वजनिक हुने महासचिव उपाध्यायले बताए । निर्वाचन आयोगमा नेकपा दर्ता भएको एक वर्ष पुगिसकेकाले अब नेकपा एमालेलाई दर्ता हुनबाट कानूनतः रोक्न नसकिने आयोगका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
हाल नेकपाको जिम्मेवारीमै नरहेका युवायुवतीलाई केन्द्रीय समितिमा राखेर मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीकै दिनमा पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिइनुले भोलि नेकपामा विभाजन आइहाले पार्टीको डोमेन सुरक्षित गर्ने राजनीतिक ध्येय लुकेको हुन सक्ने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुको प्रारम्भिक विश्लेषण छ ।
उक्त पार्टीमा सन्ध्या तिवारी- अध्यक्ष, भगवती खड्का- उपाध्यक्ष, मनिष उपाध्याय- महासचिव, अस्मिता सुनार, दावा लामा, जयाराम रावत, खगेन्द्रप्रसाद भुसाल, हिराबहादुर बोहरा, राधा पुरी, तारादेवी शाही, पवन बिष्ट, निलम पोखरेल, किरण लामिछाने, उमेश महतो, उशाकुमारी झा, प्रदीपराज गिरि, पूर्णिमा तामाङ, निश्चल बस्नेत, सञ्जिव विष्ट, विनिता कार्की र विमला बिष्ट रहेका छन् ।
यसैबीचप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मन्त्री र नेताहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । दुवै अध्यक्षले अहिले पार्टीभित्र देखिएका समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले केही मन्त्री र नेताहरूलाई बोलाएका थिए । पार्टीभित्र देखिएका समस्यालाई लिएर उनले सबैसँग परामर्श गर्न लागेको र सोही क्रममा मन्त्री र नेताहरूलाई बोलाएको उनले बताएका थिए ।
बैठकमा सहभागीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सोधेका थिए, ‘पार्टीभित्रका समस्या, संकट कसरी हल गर्ने ? सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? सरकारका कामहरूलाई कसरी चुस्त बनाउने ? पार्टीभित्र एकता कायम गर्ने कुरामा के सुझाव छन् ।’ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, नेताहरूसँग सुझाव मागेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले बताए ।
‘सहभागीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ऐतिहासिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता रहेको बताउनुभएको थियो । यति ठूलो जनमतबाट हामीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ, यसलाई सम्झिनुपर्‍यो । पार्टी एकतालाई हरहालतमा बचाउनुपर्‍यो । नेताहरूको बीचमा विश्वासको संकट देखिन्छ । त्यसलाई हल गर्नुपर्‍यो । कुरा केके हो, नेतृत्वको बीचमा खुला खुलस्त गर्नुपर्‍यो,’ बैठकमा सहभागीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका सुझावबारे भट्टराईले भने, ‘सहमतिपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्नुपर्‍यो । पार्टी र सरकारको बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्‍यो । यी सबै काम गर्न मूलतः पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका रूपमा तपाईंले नै ज्यादा अग्रसरता देखाउनुपर्छ । लचकता पनि देखाउनुपर्छ । सबै नेताहरूलाई विश्वासमा पनि लिनुपर्‍यो । एकताबद्ध बनाएर लानुपर्‍यो ।’
बैठकमा सहभागी नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नेतृत्वमा रहेकाहरूले गुटबन्दी छोड्नुपर्ने बताएका थिए । ‘प्रोक्सी वार छोड्नुपर्‍यो । गुट-गुटहरू योजना बनाउने, षड्यन्त्र गर्ने प्रचलन छोड्नुपर्‍यो भनेर सबैले भन्नुभयो,’ उनले भने ।
बैठकमा मन्त्री भट्टराईले भने अध्यक्षद्वय मिलेर जानुपर्ने बताएका थिए । दुवै अध्यक्षले मृत्युलाई जितेर आएकाले पार्टीभित्र देखिएका समस्या हल नहुने भन्ने नभएको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझावबारे उनले भने, ‘तपाईंले गोलघरमा ६ वर्ष बिताउनुभयो । तपाईंलाई हतकडी लगाएर, नेल लगाएर राखियो । त्यस्तो अवस्थाबाट बाँचेर आउनुभयो । प्रचण्ड कामरेड पनि सेल्टर बसेको पल्लो घरमा बम खसेको थियो । वल्लो घरमा हानेको भए उहाँ पनि सकिनुहुन्थ्यो । भन्नाले उहाँले पनि मृत्युलाई जितेर आउनुभएको हो । तपाईंहरू मृत्युलाई जितेर आएका नेताहरू हुनुहुन्छ भने यस्ता समस्या हल गर्न किन नसक्ने ? मैले त्यो भनेँ ।’
नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिन ओलीलाई भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो पटक आफूलाई हटाउन भारतीय राज्यसंयन्त्र, भारतीय राजदूतावास र आफ्नै पार्टीका नेताहरू षड्यन्त्रमा लागेको भनेपछि नेकपाका नेताहरूले राजीनामा मागेका हुन् । स्थायी कमिटीको मंगलबारको बैठकमा नेताहरूले दुवै पदबाट राजीनामा दिन भनेका थिए ।
आफ्नो राजीनामा माग भएपछि प्रधानमन्त्रीले बुधबार बिहानैदेखि आफूनिकटका नेता र मन्त्रीहरूसँग परामर्श थालेका हुन् । बुधबार बिहान उनले मन्त्री र नेताहरू गरी ६० जनाजतिसँग परामर्श गरेका हुन् ।
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक एक घण्टा बसेर स्थगित भएको छ । बुधबार बालुवाटारमा बसेको पाँचौं दिनको बैठक एक घण्टा बसेर स्थगित भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
कांग्रेस सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधनमा संघीय संसद्को बैठकमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यक्रम तय भएपछि त्यसमा सांसदहरु सहभागी हुनुपर्ने भन्दै बैठक स्थगित गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सांसद छन्त्यालको बुधबार बिहान सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । बैठकमा मंगलबारकै एजेन्डा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ताका विषयमा केन्द्रित रहेर बैठकमा पाँच नेताले आफ्ना धारणा राखेका छन् ।
लीलामणि पोखरेल, मातृका यादव, नन्दकुमार प्रसाई र पेशल खतिवडा र योगेश भट्टराईले धारणा राखेका छन् । जसमध्ये चार नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनमा दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर, पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले भने पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउन नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् । अर्को बैठक बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ ।